Aniga ama Mourinho: Pogba Oo Laba Daran Kala Dooransiiyey Manchester United | Raadgoob
Aniga ama Mourinho: Pogba Oo Laba Daran Kala Dooransiiyey Manchester United
October 2, 2018 - Written by admin
Paul Pogba ayaa ku hanjabay inuu ka tegi doono Manchester United bisha January haddii aan shaqada laga caydhiyey Jose Mourinho.
Pogba iyo Mourinho ayaa waxa u dhexeeya khilaaf meel xun maraya, waxaana wararku ay sheegayaan in Spacial One uu ku jiro maalmihiisii ugu dambeeyey ee Old Trafford, hase yeeshee mar uu shalay warbaahinta la hadlay ayaa uu sheegay in shaqadiisu aanay halis ku jirin, taas oo keentay in Pogba uu si degdeg ah go’aan ugu gudbiyo maamulka sare ee kooxda.
Sida uu qoray wargeyska The Sun ee kasoo baxa UK, Pogba ayaa maamulka Manchester waxa uu gacanta ka geliyey go’aan adag oo uu ugu sheegay in ay kala doortaan isaga iyo tababare Jose Mourinho, isaga oo carrabka ku adkeeyey in haddii la eryi waayo Jose uu isagu ka tegi doono bisha January.
Pogba oo Manchester United ay £89 milyan kaga soo iibsatay Juventus ayaa toddobaadkii hore uu xilka kabtan ku-xigeenka ka qaaday Jose Mourinho, waxaana uu warbaahinta u sheegay in aanu mar dambe kabtan noqon doonin.
Tababaraha ayaa ku eedaynaya Pogba in aanu si fiican u ciyaarin, laakiin ciyaartoyga ayaa isaguna aaminsan in qaab-ciyaareedka tababaraha oo ku dhisan difaac uu wiiqayo bandhiggiisa.
Si kastaba ha ahaatee, maamulka kooxda ayaa la filayaa inay maalmaha soo socda go’aan ka qaataan tababare Jose Mourinho haddii ay isbeddeli waayaan natiijooyinka liita ee ay soo hoynayaan, isla markaana uu demi waayo khilaafka sii huraya ee u dhexeeya ciyaartooyada iyo macallinku.